Maalinta: Sebtember 1, 2018
3 sano kahor, Durmazlar ASELSAN iyo shirkada walaasheeda ah, ELK Motor, waxay kala saxiixdeen heshiis ah qaabeynta iyo soosaarista nidaamyada taraafikada maxalliga ah. Mashruucu wuxuu ku socday baaxadda TEYDEB oo si guul leh [More ...]
Guleryuz waa shirkad soo saarta basaska kuna yaal Bursa. Waxaa la aasaasay 1967 si loo soo saaro shaqada jirka ee gawaarida waxyeelladu gaadhay. magaca Mercedes-Benz, MAN, Renault. [More ...]
“Mashruuca Goobaha Fudud ee Smart ği oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Manisa si loo yareeyo isu socodka magaalada, Terminal, Akhrisar Degmada, Zeytinliova, Tahir Ün iyo Hotel To tubaakada, Akhisar 1. Shipping and Taris, Akhisar 151. [More ...]
SAMULAŞ Shaqaalaha Greve Mi Going?
Tareenka Workers 'Union of Turkey Samsun Branch Madaxweynaha Murat hagaajin midhiihii ka, ayaa sheegay in baahida loo qabo horumarinta on mushaarka shaqaalaha ee samulaş'. Ük Dhamaadka hanaankan, sharciga awgiis, shaqo-joojin ayaa la bilaabay si loo aqbalo caddeynteena. [More ...]
Intii u dhaxaysa Samsun iyo Ankara, Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu noqon doonaa Saacadaha 2
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Samsun-Çorum-Ankara, oo la kireystay bilihii dhawaa, ayaa bilaabay inuu qaab yeesho. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan injiilka xawaare sare ku jooga Samsun wuxuu noqon doonaa mid soo gabagabooban marka la hirgaliyo warka wanaagsan. Waxyaabaha ku saabsan Samsun-Çorum-Ankara Faahfaahinta Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare [More ...]
Lastic iyo Domestic National Lastik Petlas li
1974 Intii uu socday Hawlgalkii Nabadda ee Qubrus, cunaqabateyntii Mareykanku waxay soo rogtay xalka raadinta markii diyaaradaha dagaalka aysan ka helin wax taayir ah. [More ...]
Taageerayaasha Trabzonspor ayaa tagi doona Stada Free
Dowlada hoose ee Trabzon Metropolitan Munito ayaa la ciyaari doonaa Sabtida (Maanta) Taageerayaasha Galatasaray ayaa si xor ah ugu qaadi doona garoonka ciyaarta. Duqa Magaalada Trabzon Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, oo labo qodob oo kala duwan ku leh bartamaha magaalada [More ...]
Helitaanka Dilovasi oo laga soo bilaabo Eynerce Junction
Ka sokow dhismaha wadooyinka isku xirka galbeedka ee Dilovası, Kocaeli Magaalo-Weyne ayaa hadda dhisaya wadooyin isku xira Isgoyska Eynerce kaas oo ku yaal bariga. Dilovası Eynerce Junction - Yavuz Sultan Selim Street Connection Road [More ...]
Wadada Cusub ee Isbitaalka Magaalada Bilkent
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay waddo cusub u furi doontaa agagaarka Isbitaalka Bilkent City waxayna ku xireysaa gobolkan Angora Boulevard. Boulevard-ka cusub wuxuu ku yaalaa Bilkent, Angora Boulevard, kaas oo ku xira albaabka Jaamacada Hacettepe Beytepe Campus. [More ...]
Waqtiga ugu horeeya ee adduunka ee Capital ah! 'Durak Ankara' Adeegga
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa adeegsaneysa dalabka "DURAK ANKARA", oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay caasimadda. Thanks to codsigan oo sugaya basaska Başkentliler EGO inay gaaraan waqtiga joogsiga si dhakhso badan wax looga barto. HALKAN KA DHAGEYSO adduunka [More ...]
Maanta taariikhda: 1 September 2008 152 ee Railways. aasaas
Maanta taariikhda 1 Sebtember 1940 khadka Diyarbakir-Bismil (47 km) ayaa la furay. 1 Sebtember 1900 Dhismaha Wadada Hejaz wuxuu ku bilaabmay xaflad rasmi ah oo lagu qabtay magaalada Dimishiq. Khadku waa qaybta koowaad ee la dhammaystiray ee Wadada Tareenka ee Hejaz [More ...]